Gooddayyaa tokko isa teessuma tarjaawwan tokko yk tokko ol barruu fi wantootaaf uumuu sidandeesiissuu saaga.
Saagi - Goodayyaa filadhu
Kamshaa Saagi banitti,
Hujeekaan Goodayyaa Saagi
Goodayyaa tokko haquudhaaf, handaara goodayyaa cuqaasitii, kana booda haqi dhiibi.
Yoo jalqabaaf dhumaa barruu goodayyaa keessatti xiyyoota dimaa xiqqaa agarte, qabduuwwan xiyya kana barruu hafan keessa maruudhaaf, itti fayyadami.
Bakka duraargii, qaaqa goodayyaa keessatti, goodayyaan rektaangilii magariisaan, bakki wabii ammoo, rektaangilii diimaadhaan bakkabuu'a.
yammuu korkoddii goodayyaa gara "Akka Arfii" tti jijjiirtu, akkasuuma durargii galteewwanii agarsiissuu nidandeessa. "Sarjala"n halluu diimaadhaan fakkafama, "Arfii"n hojjaa bocquutti, akkasuuma "Sararii" hojjaa sararaa kan goodayyaa dabalateetti.
Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.
Halluu duubbee ykn saxatoo qindeessi.
Sajoo kamshaa Saagi irratti:
Bakka ati galmee keessatti harkisuu dandeessu, goodayyaa tokko fakkasa. Lakkoofsa tarjaawwanii goodayyaadhaaf filachuuf, xiyya isa sajoo itti aanee jiru chuqaasi.
Goodayyaawwan Barruu, Saaguu, Gulaaluu, Walqabsiissuu
Title is: Goodayyaa